Misa i-WordPress Ugaxekile Ngeziphakamiso Ze-Pro kusuka ku-Semalt
Ugaxekile wokubhalisa nokuphawula kogaxekile yizinkinga ezimbili ezinkulu ze-WordPress blogs namawebhusayithi. Kuvamile kumawebhusayithi ephrofayela ephezulu ukuthola amakhulu ezinkulungwane zamazwana ogaxekile nokubhaliswa okukhohlisayo ngesonto. Lezi zinhlobo zogaxekile zingalimaza noma zichithe idumela lakho ngezinjini zokusesha kanye nabafundi uma ungazitholi kahle - hospedagem sites gratuitos. Ngakho-ke, kufanele ubhekane ne-spammers futhi uvimbele imizamo yokugaxekile isayithi lakho noma ibhulogi. Ngokujabulisayo, kunamanye amathiphu okubhekana nokuphawula kogaxekile kanye nokubhaliswa kogaxekile.
Uma ulungiselele kahle indawo ye-WordPress, ungase ulandele lezi zeluleko u-Frank Abagnale, isazi esihamba phambili se-12 (Semalt , ukuqinisekisa ukuphepha nokuvikelwa kwesayithi lakho.
Ithiphu # 1: Lungiselela izilungiselelo zokuxoxa nge-WordPress:
Nakuba ungafaka inombolo enkulu yama-plugin we-WordPress ukubhekana nokugaxekile kogaxekile nokugaxekile kogaxekile, ungahlela izilungiselelo zengxoxo ze-WordPress. Zisezindaweni zezilungiselelo zendawo yomqondisi, njenge-www.abc.com /wp-admin/options-discussion.php. Indlela elula futhi egcwele yokumisa amazwana wogaxekile nokugaxekile kogaxekile ukuvuma amazwana akho nokuguqula ukubhaliswa okwesikhashana ngesandla. Indlela engcono kakhulu, kodwa, ukufaka ama-plugin akuvumela ukuthi ubuyekeze umhloli wamazwana futhi uwavumele ngokuzenzekelayo..Amazwana abukeka engekho emthethweni ngeke ashicilelwe kusayithi lakho. Ngokufanayo, abasebenzisi abakwa-IP abakhethiwe ohlwini lwabo ngeke bakwazi ukubhalisa noma ukubhalisela ezincwadini zakho zezindaba.
Ithiphu # 2: Buyekeza njalo izilungiselelo zengxoxo:
Ukubhekana nokugaxekile kogaxekile noma ugaxekile wokubhalisa, kufanele uhlole futhi ubuyekeze izilungiselelo zengxoxo ngaphambi kokuvuma noma yini kuwebhusayithi yakho. Kuyindlela enhle yokunciphisa inani lamazwana ogaxekile nokubhalisa okuza kuwebhusayithi yakho nsuku zonke.
Ithiphu # 3: Faka amafomu e-Captcha:
Amafomu ase-Captcha afakwe inani elikhulu labantu futhi asebenze njengamathuluzi anamandla okulwa nogaxekile. Basiza ukunciphisa inani lamazwana ogaxekile nokuvimbela ukugaxekile kogaxekile ngezinga elithile. Kufanele ufake ifomu le-captcha masinyane kusayithi lakho bese uqhubeka nokususa amazwana angabonakali afanelekile. Ngaphezu kwalokho, akufanele ukwamukele umbhali noma umhleli ongawuthembi.
Ithiphu # 4: i-Akismet plugin:
I-Akismet iyi-plugin enamandla futhi enamandla eyenziwa yi-Automattic. Ihlanganisa amakhophi wamazwana wakho ku-database yayo futhi ikusiza ukuthi ususe amazwana ogaxekile nokubhalwa kogaxekile ngezinga elithile. Le plugin ivikela iwebhusayithi yakho kusuka ku-spammers futhi ihlola wonke amazwana nokubhalisa ngobuqiniso ngaphambi kokuyamukela. Kodwa-ke, le plugin ayivumeli njalo imibono esemthethweni futhi ayikwazi ukuhlola ukuthi yimaphi amazwana amnandi nokuthi yiziphi ezimbi.
Ithiphu # 5: Khubaza Amazwana Emathuneni Okudala:
Elinye isu elihle ukukhubaza imibono ekuthunyelwe kwakho okudala nokuvimbela ukubhaliswa kwabagaxekile ngokuzenzakalelayo lapho isayithi lakho likhula. Abakwa-spammers ngeke bakwazi ukuphawula uma ukhubaze imisebenzi yakho yewebhusayithi. Ngenxa yalokhu, hamba ku-Izilungiselelo> Isixazululo sendawo bese ubheka inkinobho yamazwana e-Automatically Close. Chofoza kuleyo nkinobho bese uqala kabusha ifasitela / isistimu yakho yokusebenza.
Ithiphu # 6: Kudinga ukulinganisa:
Yiya kuzilungiselelo> Ingxoxo yokuxoxa lapho ungabona khona izinhlobo ezahlukene zezindlela ongakhetha kuzo iWespress site yakho ukunciphisa ukuphawula kogaxekile nokubhalwa kogaxekile.